Kunyangwe kudzimwa kwemamwe maodha epamusoro
Plume Console Piano
Plume Inotakurika Dhijitari Piano
Plume Yakatwasuka Piano
“Kunyangwe kudzimwa kwemimwe mirairo yekukunze kwenyika kwakakonzerwa nedenda iri, ndaisatarisira kuwana maodha mazhinji nekuvimba nenhepfenyuro yemazuva ano. Yakanga iri tsaona yakanaka! ” Pamasikati aMay 30, Zhu Li, sachigaro wePlume Piano Manufacturing (Wuhan) Co, Ltd., uyo akakokwa kutora chikamu munhepfenyuro yechipiri ye "Huangpi Intelligent Manufacturing Mulan Boutique", akafara zvikuru kuti aive apedzisira vakabatsirwa nhepfenyuro mhenyu ye e-commerce kekutanga.
Plume Piano Kugadzira (Wuhan) Co., Ltd.chimbo chekugadzira chiridzwa chiri muXinlong Tengfei Industrial Park, Hengdian Street, Huangpi, inotsvaga mukutsvagisa software nekuvandudza, dhizaini yezvigadzirwa, kugadzirwa, kugadzira uye kushambadzira kwechiratidzo kwepiyano yakatwasuka, katatu piyano, piyano yemagetsi uye piano yehungwaru hwekugadzira. Kubva pakagadzwa muna2017, Plume Piano anga achitarisa kumisika yekukunze. Zvinopfuura 95% zvezvigadzirwa zvayo zvinotengeswa kune nyika dzinopfuura makumi mashanu nematunhu epasirese. Yayo yekutengesa vhoriyamu yakasvika madhora zana nemakumi masere emadhora mu2019 uye yakaratidza kukura kwekukura gore rega.
Muna Ndira 2020, Zhu Li akasaina odha yemamirioni makumi maviri nemaviri emadhora nevatengi vekare pachiridzwa chemimhanzi, icho chakange chakatarisirwa kutumirwa munaJune, asi mushure mekudzoka muna Ndira 22, vamwe vatengi vekunze vakabvisa madhodha avo nekuda kwedenda. Zhu Li akaedza kutaurirana nevatengi vake vekare achitarisira kudzoreredza kurasikirwa, asi iwo maemail mazana maviri haana kupindura. "Ndanga ndichichema chaiko, uye ndanga ndisingazive zvekuita." "Zhu Li akadaro.
Ino nguva yekutora chikamu muhurumende yedunhu yakarongeka mhenyu nhepfenyuro e-commerce, Zhu Li anga asina kana kutenda pakutanga. Zvisingatarisirwi, iwo maminetsi makumi mapfumbamwe enhepfenyuro yepamoyo, akatowana maodha matatu epiyano edhijitari. “Nhasi inguva yekutanga kuyedza nhepfenyuro yepamhepo e-commerce. Handina kunzwisisa kare. Handina kutarisira kuti zvaitika zvakanaka. ” 'Kunyangwe kutengesa kuri kukanganiswa zvakanyanya nedenda iri, hurumende yakaisa hwaro hwekuti mabhizinesi aimbe nekutibatsira kuwedzera nzira dzekutengesa. Uye isu tinofanirwa kushandura nzira yedu yekutengesa. ' Vakati gore rino, Plume Piano achachinja kubva kumusika wekunze achienda mudzimba, uye achishandisa nzira nyowani yezvehupfumi ye e-commerce nhepfenyuro mhenyu kuwedzera zvishoma nezvishoma musika wepamba.
Post nguva: Jul-20-2021
Adress: 30 Jiangda Road, Jiangan Dunhu, Wuhan Guta, Hubei Province, PR China
Musiyano uripo pakati pedigital piano uye ...
Kunyangwe kubviswa kwevamwe mhiri kwemakungwa ...
Hot Zvigadzirwa, Sitemap,AMP Mobile
Smart Piano Khibhodi, Magetsi Akarurama Piyano, Dhijitari Piano Kugadzirisa, Dhijitari Yakatwasuka Piano, Magetsi Grand Piano, Yakaderera Mutengo Dhijitari Piano,